Tag: atiny fivarotana » Martech Zone
Tag: atiny fivarotana
Fotoana famakiana: 4 minitra Rehefa mamoaka ekipa mpivarotra ny orinasanao, ho hitanao fa lasa ilaina amin'ny alina ny fikatsahana atiny mahomby. Ekipa fampandrosoana ny orinasa mitady taratasy fotsy, fandinihana tranga, antontan-taratasy fonosana, topy maso momba ny vokatra sy serivisy… ary irian'izy ireo ampanjifaina amin'ny indostria, fahamatoran'ny mpanjifa ary ny haben'ny mpanjifa izany. Inona ny atao hoe Sales Enablement? Sales Enablement dia dingana stratejika amin'ny fampitaovana ireo orinasam-pivarotana amin'ny fitaovana, atiny ary fampahalalana mety hivarotra amin'ny fomba mahomby. Manome hery ny repoblika Sales izy io
Fotoana famakiana: 3 minitra Tao anatin'izay herinandro vitsivitsy lasa izay, nandinika ny atin'ny mpanjifanay rehetra izahay mba hahalalana ny atiny izay mitondra ny fahatsiarovan-tena, ny fandraisana andraikitra ary ny fiovam-po indrindra. Ny orinasa rehetra manantena ny hahazo fitarihana na hampitombo ny orinasan-tserasera dia tokony hanana atiny. Miaraka amin'ny fahatokiana sy ny fahefana no fanalahidy roa amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana sy ny atiny dia manosika ireo fanapahan-kevitra ireo amin'ny Internet. Izany hoe, mila mijery vetivety fotsiny amin'ny analytics ianao alohan'ny hahalalanao fa ilay
Alarobia 17, 2016 Alatsinainy, Aogositra 22, 2016 John-Henry Scherck
Fotoana famakiana: 4 minitra Ny varotra, amin'ny maha orinasa azy, dia mivoatra haingana. Ny ekipa mpivarotra dia afaka nanao fanatsarana paikady fanampiny tamin'ny fizotrany, saingy tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny varotra dia niditra tamin'ny vanim-potoana vaovao natosiky ny haitao, ny famakafakana ary ny fiovan'ny toetran'ny mpividy. Ny mpitantana ny varotra dia nametraka fifantohana vaovao amin'ny fampiasana ny teknolojia handrefesana ny hetsika ataon'ny mpivarotra sy ny fanatsarana ny asa amin'ny alàlan'ny famakafakana sy fanandramana amin'ny paika sy paikady. Raha mampitaha a
Talata, Desambra 1, 2015 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 3 minitra Angamba tokony ho tolo-kevitra goavambe ity infographic ity… asaivo miova ny mpamaky! Raha ny marina dia somary sadaikatra isika amin'ny firy amin'ireo orinasa manoratra atiny antonony, tsy mamakafaka ny tobin'ny mpanjifany, ary tsy mamorona paikady maharitra mba hitondrana ny mpamaky ho mpanjifa. Ny fandinihako an'io dia avy amin'i Jay Baer izay nahalala izany. Ampifanaraho amin'ny zava-misy izany. Ireo statistika roa ireo dia manondro ny maha-zava-dehibe ny fandaniana bebe kokoa